के सोल्सायरले रोनाल्डोलाई बेन्चमा राख्लान् ? | सबै खेल
इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले आइतबार घरेलु मैदानमा लिभरपुलको हातबाट ५–० को पीडादायी हार बेहोरेपछि थरीथरीका हल्ला चल्न सुरु भइसकेको छ ।
त्यसमध्ये एक हो, ओले गनर सोल्सायर म्यानचेस्टरको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट बर्खास्तगीमा पर्नेछन्। अनि उनको स्थानमा को आउने छन् त ? त्यसबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भइसकेको छ । क्लब आफैंबाट भने केही तथ्य बाहिर आएको छैन ।
बरु, उनको स्थानमा एडिसन काभानी उपयुक्त हुन सक्छन् । यो स्थितिमा पोर्चुगाली स्टार रोनाल्डोले ‘सुपर सव’ को भूमिका निभाउन सक्छन् । खेलको अन्त्यतिर रोनाल्डोलाई मैदानमा उतार्ने अनि उनकै तर्फबाट विजयी गोल निकाल्ने ।
यस्तो स्थितिमा के सोल्सायर आफ्ना स्टार खेलाडीलाई बेञ्चमा राख्न तयार हुन्छन् त रु ठ्याक्कै भन्दा उनी के रोनाल्डोलाई ‘ड्रप’ गर्न सक्छन् त रु दुई महिनाअगाडि मात्र क्लबका आएका रोनाल्डोलाई ‘ड्रप’ गर्नु एउटा उपाय हुन सक्नेछ ।
मेयर कप भेट्रान्स फुटबल : नरेन्द्रमणिको ह्याट्रिकमा झापाले हेटौंडालाई हरायो, साइनिङ सन पनि विजयी